အနောက်ကင်မရာ ၃ လုံးပါတဲ့ တန်ဖိုးနည်း Nokia 3.4 ကို ကြေညာ – DigitalTimes
HMD Global က Android One စမတ်ဖုန်း ၁ လုံး ဖြစ်တဲ့ Nokia 3.4 ကို ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ သူ့မှာ ၆.၃၉ လက်မ HD+ မျက်နှာပြင်နဲ့ Snapdragon 460 SoC ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ 4GB RAM နဲ့ Android 10 ပါလာပြီး နောက် ၂ နှစ်အထိ Android Update နဲ့ ၃ နှစ်အထိ Security Update ရမှာပါ။ အနောက်ဘက်မှာ 13MP , 2MP Depth နဲ့ 5MP Ultrawide ကင်မရာ ၃ လုံး ထည့်ထားပြီး Night Mode က ညအချိန် ဓါတ်ပုံရိုက်ရင် မိုက်မှာပါ။ အရှေ့ဘက်မှာ 5MP Punch Hole ကင်မရာ ၁ လုံး ပါလာပါတယ်။
အနောက်ဘက်မှာ လက်ဗွေရာ ကိရိယာ ထည့်သွင်းထားပြီး Google Assistant Button ပါလာပါတယ်။ ဘက်ထရီက 4,000mAh ဖြစ်ပြီး Fjord, Dusk နဲ့ Charcoal ၃ ရောင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ၁၅၉ ယူရို သတ်မှတ်ထားပြီး ၂ သိန်းခွဲလောက် ရှိပါတယ်။ အောက်တိုဘာလ အစောပိုင်းမှာ နိုင်ငံတကာမှာ ရောင်းမှာပါ။
•	6.39-inch (720 x 1560 pixels) HD+ 19.5:9 aspect ratio 2.5D curved glass display, 400 nits (typ.) / 300 nits (min.) brightness, 70% NTSC color gamut
•	3GB RAM with 32GB / 64GB storage, 4GB RAM with 64GB storage, expandable memory up to 512GB with microSD
•	Android 10, upgradable to Android 11 and 12
•	13MP rear camera with LED flash, 5MP ultra-wide camera, 2MP depth sensor
•	8MP front-facing camera
•	3.5 mm headphone jack, FM Radio
•	Dimensions: 160.97 x 75.99 x 8.7mm; Weight: 180g
•	Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC